महानायक राजेश हमाल भन्छन्- ‘राजनीतिमा होमिन तयार छु’ [भिडियो सहित]-Nagarikaawaj.com
२७ बर्षदेखि निरन्तर रंगीन दुनियामा जमिरहेका ५२ बर्षिय महानायक राजेश हमालले अहिलेसम्म ३ सय भन्दा बढि नेपाली चलचित्रमा नायकको भूमिकामा
कपिल ज्ञवाली ।
नेपाली चलचित्रको प्रर्यायवाची नाम राजेश हमाल । राजेशले सबैको मनमा एकछत्र राज गरिरहेका छन् नेपाली चलचित्र इतिहासका एक सफल पात्र पनि हुन् हमाल ।
महानायकको उपाधि पाएका उनी निकै शालिन,भद्र र जिम्मेबार ढंगले प्रस्तुत हुन्छन् । २७ बर्षदेखि निरन्तर रंगीन दुनियामा जमिरहेका ५२ बर्षिय महानायक राजेश हमालले अहिलेसम्म ३ सय भन्दा बढि नेपाली चलचित्रमा नायकको भूमिका निभाएका छन् ।
जीवनको महत्वपूर्ण समय चलचित्र उद्योगमा खर्चेका उनले अब भने राजनीतिक यात्राका लागि पनि तयार रहेको जनाउ दिएका छन् । प्रस्तुत छ, नागरिक आवाजका प्रधान सम्पादक कपिल ज्ञवालीले उनै हमालसंग गरेको एक बिशेष अन्तरवार्ता ।
१.नेपाली चलचित्र र राजेश हमाल प्रयार्यवाची शब्द हो ?
मैले नेपाली चलचित्रमा काम गर्न लागेको २७ बर्ष भो,एउटा चलचित्र कर्मीको नाताले,कलाकारको नाताले दर्शकको मायाले मलाई यस्तो हुन सक्छ ।
२.दर्शकहरुले नेपाली चलचित्र र हमाललाइ पयार्यवाचीको रुपमा बुज्दै आएका छन् ,यंहाले चांही आफ्नो परिचय कसरी दिनुहुन्छ?
मूलभुत रुपमा म कलाकार हो । यतिका बर्ष यहि बिधामा ,मैले उर्जाशील समय खर्चको छु,पेशाको हिसाबले,कर्मको हिसाबले पनि ।भनेपछि त मेरो इच्छाका हिसाबले पनि ।चलिचित्रको अभिन्न अंग बनेको छु ।
३.तपाइका क्यारेक्टर धेरै चलचित्रमा एकैप्रकारका छन् ,शालिन,भद्र,खासगरि मानिसहरुलाइ उद्धार गर्ने खालको, दर्शकहरुले कति रुचाएका छन् ?
मैले प्रबेश गर्दा नेपाली समाज अर्कै थियो ,अ‍ैले फेरिएको छ । त्यतिबेलाको सामाजिक मनोभावना,जीवनशैली,समयको माग अनुसार थियो,त्यतिबेला त्यहि नै माग थियो । मेरो छनोट र दर्शकको छनोट भन्दापनि यो समयको माग हो । समयको स्प्रिट र भाबना हो ।
मलाइ यी सबै चरित्र गर्दा खेरीमा आनन्द आउथ्यो ।आम जनजीवनलाइ नै टीपेर चलचित्र बन्थे । असाधारण चरित्र गर्थें,मेरो चरित्रमा दर्शकहरुले आफ्नो पात्र प्रतिबिम्बत ठान्नुहुन्थ्यो ।
४.यहांको चलचित्र जीवन युगदेखि युगसम्मबाट शुरु भइ अहिले पछिल्लो सकुन्तला तेश्रो लिंगीको भुमिकामा (नारी शशक्तीकरण) सम्म आइपुग्यो,बिचमा कस्ता कस्ता रोल प्ले गर्नुभयो ?
दर्शकको स्वाद र दृष्टिकोण फेरिएको छ ,अहिले नेपाली समाज परिबर्तित भएको छ ,अहिले चलचित्रपनि सोहि अनुसार फेरिएका छन् । दर्शकको स्वाद अनुसार मैले भूमिका निभाएको छु ।मैले दर्शकलाइ सम्बोधन गर्दै दायरा फराकिलो बनाएको छु । बिभिन्न फरक बिषयबस्तुमा चलचित्र बन्न थालेका छन् । मलाई फरक भूमिकामा काम गर्न पाउदा फरक अनुभुति पनि भएको छ । म खुसि छु ।
५. तेश्रँे लिंगको भूमिका निर्बाह गर्न कस्तो हुदो रै छ ?
कलाकार भैसकेपछि सबै खालका दर्शकको स्वाद अनुसार मैले भूमिका निभाएको छु । मैले दर्शकलाइ सम्बोधन गर्दै दायरा फराकिलो बनाएको हुु ।अर्काे कुरा यो सुखद क्षण पनि हो ।सबै चलचित्रमा एउटै भुमिका भन्दा फरक गर्न सके आफुलाइ पनि राम्रो दर्शकलाइ पनि फरक स्वादको अनुभूति हुने ।
६.लक्ष्मणरेखा नाघेका नेपाली केहि चलचित्रहरुलाइ के भन्नुहुन्छ ?
होइन,अब मैले कसैलाइ यस्तो ,उस्तो चलचित्र बनाउ नबनाउ भन्न मिल्दैन । केहि चलचित्रहरु फरक ढंगले आएका छन् । यस्को निर्णय दर्शले नै गर्नेछन्। बिभिन्न कथाबस्तु र बिषयमा आएका छन् ।
७. प्रबेशका बेला राजेश हमाल महानायक बन्ने सपना बोकेको थियो ?
गरेको थिएन,त्यतिबेला त्यस्तो माहोल नै थिएन,कुनै उदाहरण नै थिएन लामो सयमसम्म चलचित्रमा काम गर्ने कोहि ब्यक्तिको । बर्षमा एउटा फिल्म मुस्किलले बन्थे,मैले पहिलो चलचित्र गर्दा दोश्रँे चलचित्र कस्ले बनाउछ,कहाबाट आउछ ,मलाइ खेल्न दिन्छन् की दिदैनन् भन्ने चिन्ता हुन्थ्यो ।
पहिलोमा सफल भएपनि दोश्रोमा खेल्न पाइएला भन्ने ।तर एकदम कन्फिडेन्टका साथमा भने म आएको थिएन । २७ बर्षसम्म यहि क्षेत्रमा सेवा गर्न पाएं ,तर,केहि न केहि दुरदर्शिता त बोकेरै आएको हुं । झिनो दूरदर्शिता मात्रै थियो ।
८. राजेश हमाल के कारणले सधैं लोकप्रिय र सफल भयो ?
सुरुवातका दिनमा नेपाली दर्शकलाइ नै ध्यान दिएर काम गरें,जनताकै पीडा ब्यथा मैले बोल्थें ,मेरो मनासाय नै त्यहि थियो,मनोरञ्जनात्मक ढंगले,गीत,नाचगान,लडाइ,पीडा,खुसी ,ब्यथा, गरेर चलचित्र बन्थे ।साधारण जीवन भएका कुरा,पर्दामा देखाउथें, त्यसमा नागरिकको आफूहरुको ब्यथा बोलिदिएको पात्रको रुपमा सम्झनुहुन्थ्यो । त्यहि कारणले हालेला सबैको मनमा पुगेको छु । सायद जनताकै आफ्नै भावना प्रतिबिम्बत भएर होला नी ।त्यसैको उपजले म निरन्तर यता लागें ।
९. बिस. २०२१ साल जेठ २६ गते यहाको पाल्पा तानसेनमा जन्मभयो,अहिले ५२ बर्षे हमालको जोश बढ्दै छ की अल्छिपन बढ्दैछ ?
हाहाहाहा ,‘खै मैले उमेर गन्ने छाडें ’ २५ बर्षपछि मैले उमेर काउन्ट गरेको छैन । अहिलेसम्म कुनै जोश घटेको छैन । चलचित्रमै योगदान गरौं भन्ने मन छ,अझै फरक फरक क्यारेक्टरमा जनताको मनको कुरा चलचित्रमा उतारौं भन्ने नै मनसाय छ । बदलिदो परिस्थितीको पात्र बन्ने अझै रहर छ ।
१०. एउटा पाकिस्थानी फिल्ममा पनि नायककै भूमिकामा खेल्नुभयो हैन ?
हो,हो एकपटक यो अबसर पनि मैले पाएं,जानलेवा नामक चलचित्र थियो ,नेपालबाट म र निरुता सिंह नायक नायीका र पाकिस्थानको टीमसंग खेलेको थिए ।यो पनि फरक अनुभब रामै्र भयो ।लामो समयसम्म नेपाली भाषामै डुबेको मान्छे फरक भाषामा बोल्नु र अभिनय गर्नुपनि गह्रौ नै थियो ।
११.राजेश हमाललाइ सायदै धेरै सोधेको प्रश्नको जवाफ यहाले दिइसक्नुभयो ,५० बर्षमा २८ बर्षकी मधु भट्टराइसंग बिहे गरेर ।अब राजेशलाइ सन्तानको माया कत्तिको बढ्दैछ ?
हाहाहाहा… सन्तानको मोह त भै नै हाल्छ ,तर साह्रै हतारिएको छैन ,तर उमेरको हिसाबले सायद हतारिनु पनि पर्ला हाहाहाहा..,तर मैले सबै कुरो ढिलो नै गर्ने गरेको छु । म साहै्र हतारमा भने छैन ।यो कुरा पनि ढिलै हुन्छ की ।
१२. पाल्पामा जन्मेको हमाललाई जन्मेको ठांउको माया र पहाडका आफन्तसंग कत्तिको माया र भेटघाट हुन्छ ?
म अ‍ैले सबैभन्दा माया गर्ने नेपालका डाडांकांडा नै हुन् । मेरो कुनै बेला मुलुकबाहिरै बसौं उता हराउ जस्तो लाग्थ्यो ।तर अ‍ैले मैले पहाडी इलाकालाइ बढि माया गर्छु ।
पाल्पाको पद्मोदय हाइ स्कूलको हेडमास्टर हुनुहुन्थ्यो बुबा । म पाल्पा मिसनमा जन्मिएको हुं ,६ महिनामै म यहाबाट बसाइसराइ भो तैपनि मेरो माया र साइनो पाल्पासंग फरक ढंगले जोडिएको छ । सम्बन्ध छ ,भेटघाट पनि भैरहेको छ ।भैरवस्थान,पाल्पा,तानसेन साहै्र मनपर्छ ।
१३. यतिबेलाको नेपाली राजनीति प्रति तपाइको केहि टीप्पणी छ ?
नेपालको राजनीति एक दमै ठिक भैरहेको छैन । धेरैको जवाफ यहि हो । सन्तोष्जनक छैन मेरोपनि यहि हो ।उतार चढाब बढि छ ।अभिभारा भने राजनीति सम्हाल्नेहरुको हातमा छ । खह्रो रुपमा उत्रिन मान्छेको कमी देख्छ ।
१४. कसरी सुधार्ने त उसोभए ,केहि सुझाव छ ?
जस्ले राजनीति हाकिरहेको छ उस्ले नै हो त्यो काम गर्ने , उहाहरुले नै हो हल गर्ने ,उहाहरुको समर्पण र समय खर्चिनु भएको छ । सानो देशका धेरै समस्या हुन्छन् । सबै कुरालाइ दृष्टिगत गर्दै राष्ट्रियता र स्वाभीमानलाइ ख्याल गरिदिनुपर्छ । नेपालीलाइ स्वाभिमान बन्ने मौका दिनुपर्छ , भुराजनीतिक परिस्थितीलाइ कायम राखेर अघि बढ्नुपर्दछ ।
१५. संबिधान आएपछि पनि नागरिकका अपेक्षा किन पूरा हुन सकेनन् ?
यो रामायणmमहाभारत त होइन । सतप्रतिशत स्विकार्य त हुदैनन् । सबैको चित्त बुजाउनु पर्दछ । तर संबिधान चलायमान,संसोधनीय छ । मिलाएर जानुपर्छ । संबिधानको स्वीकार्यता र अपनत्व सहित संसोधन ठिक होला ।
१६. अब,राजेश हमालले आफ्नो दायरा फराकिलो बनाइरहेको पात्र हो , हमाल राजनीतिमा आउने हल्लाहरु चलेकै छन् ?तर यर्थाथता के हो?
मैले राजनीतिमै चासो राखेकै छु ।मूलभूत रुपमा म कलाकार नै हो ।सामाजिक परिस्थिती प्रति चासो राखिएकै हो । नामका लागि मात्र राजनीति गर्दिन । चलचित्रमा राम्रो मुद्धा उठाएपनि मान्छेहरु पत्याउदैनन् ।
तर खास परिबर्तनका लागि राजनीतिमा प्रति म आकर्षित छु । दलहरुले नै मिलाए राम्रो हुनेथियो ।दलले गरेनन् भने हेरेर मात्रै बस्ने अबस्था त छैन । आम नागरिकहरुले सबै नेतालाइ ट्राइ टु टेष्ट हेरिसके ।
१७. उसोभए राजेश हमाल जनताले चाहेमा राजनीतिमा होमिन्छ ?
राजनीतिमा जतिबेला म आउछु त्यतिबेला केहि परिवर्तन गर्नेगरि । जटिलता त त्यहा पनि छन् । बिचार ,नेताको छत्रछांया कस्को अन्डरमा बस्ने भन्ने पनि त कुरा हेर्नुपर्यो । रहरले राजनीति हुदैन तर परिवर्तनका लागि भने तयार छु । दलले जनतालाइ सन्तुष्टि बनाउन सकेको भए त अब राजेश हमालको आश किन गर्नुपर्थ्यो नी ।सुधार ल्याउने चिज त राजनीति नै हो ।
१८. जीवनसंगीनी मधुसंगको सम्बन्ध कस्तो छ ,कसरी भेट भो पैले ?
अहिले राम्रो छ । उनीसंग ब्युटि कन्टेक्समा भेटभएको हो।उनी सहभागि कार्यक्रममा म जर्ज थिए । उनीसंग एकाएक मन र आखा जोडियो ।त्यहिबाटै शुरु भो यात्रा ।
१९. नेपाली चलचित्रका मुख्य बिशेषता के हुन् ?
हामी हाम्रो शैलीबाटै फिल्म बनाउने गरेका छौं । समस्या नै बिशेषता हुन । बजेट,उपकरण,समय अभाबका बिचमा पनि mिल्महरु बनिरहनु नै बिशेषता नै हो ।
२०.सबैभन्दा मनपरेको चलचित्र र डाइलग कुन् हो ?
युगदेखि युगसम्म,देउता लगायतका फिल्म मनपर्छ ।
‘साथीहरुको लागि यो हात सलाम,दुष्मनको लागि यो हात फलाम ’ यहि हो ।
२१. अन्त्यमा,अब राजेशले गर्न के बांकी छ ,लक्ष्य के छ ?
समाज सुधारको अभियानमा छु,देशको अबस्थामा पनि धेरै चासो बढाएको छु । चलचित्रमा योगदान पनि पुर्याउ भन्ने पनि छ ।
२२.समय र सम्बादका लागि धेरै धन्यबाद ?
म पनि निकै खुसि भएको छु । लोकप्रिय अनलाइन नागरिक आवाजलाइ धेरै धन्यबाद ,यहांलाइ पनि धन्यबाद ।